ဘိုင်ဒန်နှင့် ပူတင်တို့ ဂျီနီဗာတွင် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည် - Xinhua News Agency
ဘိုင်ဒန်နှင့် ပူတင်တို့ ဂျီနီဗာတွင် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည်
အမေရိကန်က ယူကရိန်းသို့ ပေးပို့သည့် တန်ချိန် ၉၀ ကျော် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းရောက်ရှိလာပြီး ဂျာမနီက လက်နက်များ ပေးပို့ခြင်းမရှိဘဲ ဆေးရုံထောက်ပံ့ပေး
အမေရိကန် ဒါးလက်စ်မြို့တွင် သေနတ်ပြပွဲ ကျင်းပ
ဝါရှင်တန်၊ မေ ၂၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်တို့သည် ဇွန်လတွင် ဂျီနီဗာမြို့၌ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ဖွယ်ရှိကြောင်း အမေရိကန် သတင်းမီဒီယာက မေ ၂၄ ရက်၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ မီဒီယာများဖော်ပြချက်အရ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့သည် ဘိုင်ဒန်က သမ္မတတာဝန်ယူပြီးနောက် ပူတင်နှင့် ပထမဆုံး လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံမည့် အစည်းအဝေးအတွက် နေရာဖြစ်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသား လုံခြုံရေးအကြံပေး Jake Sullivan နှင့် ရုရှားနိုင်ငံ အမျိုးသားလုံခြုံရေး အကြံပေး Nikolai Patrushev တို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးနောက် အဆိုပါ သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ “ဒီအစည်းအဝေးက အမေရိကန်-ရုရှား ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက် ပြင်ဆင်ရေး အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး နေ့ရက်နဲ့ နေရာကို နောက်ပိုင်းမှာ ကြေညာသွားမှာပါ” ဟု အိမ်ဖြူတော်က မေ ၂၄ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
Sullivan နှင့် Patrushev တို့ တွေ့ဆုံမှုသည် “ထင်ရှားတဲ့ ကွဲပြားမှုတွေ” ရှိသော်ငြားလည်း အပြုသဘောဆောင်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူနှစ်ဦးသည် မဟာဗျူဟာမြောက် တည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်များကို ဦးစားပေးခြင်းနှင့်အတူ အပြန်အလှန် အကျိုးစီးပွား ကိစ္စရပ်များအပေါ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
“အမေရိကန်-ရုရှား ဆက်ဆံရေး ပုံမှန်ဖြစ်တာက နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီကြရန် နှစ်ဘက်လုံး သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ဝါရှင်တန်နှင့် မော်စကိုကြား ဆက်ဆံရေးသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ပဋိပက္ခဆန်ဆန်ဖြစ်ပွားလျက် ရှိကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံကြား ယူကရိန်း၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲ ကြားဝင်နှောင့်ယှက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သော ကိစ္စရေးရာများ၌ သိသာထင်ရှားသော ကွဲပြားမှုများ ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘိုင်ဒန် အစိုးရအနေဖြင့် ရုရှားနိုင်ငံနှင့် “ပိုမို၍ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး တည်ငြိမ်မှုရှိသော ဆက်ဆံရေး” ကို ရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီ ဘလင်ကန် (Antony Blinken) နှင့် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆာဂျီ လာ့ရော့ဗ် (Sergei Lavrov) တို့ လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က အိုက်စ်လန်းတွင် တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် နှစ်နိုင်ငံ တင်းမာသောဆက်ဆံမှုများအကြား “စိုးရိမ်ဖွယ် မတူကွဲပြားမှုများ” ကို လက်ခံလျက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသော ဆန္ဒကို ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘိုင်ဒန်သည် ဇွန်လ၌ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် Group of Seven (G7)ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တွင် NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေး တက်ရောက်မည့် ၎င်း၏ ဥရောပခရီးစဉ်အတွင်း ပူတင်နှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ယခုအစောပိုင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Biden, Putin likely to hold summit in Geneva: reports
WASHINGTON, May 24 (Xinhua) — U.S. President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin will likely holdasummit in Geneva in June, U.S. media reported on Monday.
Citing sources familiar with the matter, several media outlets said that the Swiss city of Geneva is expected to be the venue for Biden’s first in-person meeting with Putin as president.
The reports came as National Security Advisor Jake Sullivan held consultations with his Russian counterpart Nikolai Patrushev. “The meeting was an important step in the preparation foraplanned U.S.-Russia summit, the date and location of which will be announced later,” the White House said inastatement on Monday.
The meeting between Sullivan and Patrushev was “constructive” despite “outstanding differences,” according to the statement. The two officials also discussedawide range of issues of mutual interest, withahigh priority given to the topic of strategic stability.
“The sides agreed thatanormalization of U.S.-Russian relations would be in the interest of both countries and contribute to global predictability and stability,” it added.
Relations between Washington and Moscow have been adversarial in recent years. The two sides have obvious differences on issues related to Ukraine, cybersecurity, human rights, and U.S. election interference.
The Biden administration noted it seeks “a more predictable, stable relationship” with Russia. During their meeting in Iceland last week, U.S. Secretary of State Antony Blinken and his Russian counterpart Sergei Lavrov expressed willingness to cooperate while admitting “serious differences” amid the two countries’ tense relations.
Biden said earlier this month that he expected to meet with Putin during his trip to Europe in June, when he would attend the Group of Seven Summit in Britain and then the NATO Summit in Brussels, Belgium. ■Combo photo of U.S. President Joe Biden (L) and Russian President Vladimir Putin. (Xinhua)
COVID-19 ရောဂါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ခရီးသွားခြင်းမပြုရန် အမေရိကန်နိုင်ငံ အကြံပြု
Google က ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုခြင်း နည်းပညာသစ် တီထွင်၊ ပြောဆိုချိန်၌ ရုပ်ပုံမှာ ပိုမိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမည်ဟု သိရ